गुराँस फाँडेर कोरिडोर !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
गुराँस फाँडेर कोरिडोर !
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको टुटे सबस्टेसनदेखि ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्ममा प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १७ हजार २ सय ६९ वटा रुख काटिनेछन् ।
चैत्र ८, २०७६ अर्जुनबाबु माबुहाङ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिने कोशी कोरिडोर (२२० केभीए प्रसारण लाइन) ‘गुराँसको राजधानी’ तीनजुरे–मिल्के–जलजले (टीएमजे) क्षेत्र भएर विस्तार गरिँदैछ । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ ३० मिटर (दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर) तोकिएको छ । एंगल टावर र सस्पेन्सन टावर (करिब एक रोपनी ढाक्नेगरी बनाइएको बिजुलीको खाँबो) राख्न डोजर लगाएर खाल्डाहरू खन्ने काम भइरहेको छ । रुख कटानका लागि नम्बरिङ भइसकेको छ । टाँचा लगाउन सामुदायिक वनहरूलाई डिभिजन वन कार्यालयले पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको टुटे सबस्टेसनदेखि ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्ममा प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १७ हजार २ सय ६९ वटा रुख काटिने आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले देखाएको छ । त्यसमा पनि लालीगुराँस बढी काटिनेछन् । क्षतिपूर्तिस्वरुप एक रुख काटिए बापत दुइटा बिरुवा रोपिने भनिएको छ । टुटेको जालपा आधारभूत विद्यालय, चौकीको तीनजुरे प्राथमिक विद्यालय, मादुम्सिङको सिद्धेश्वरी आधारभूत विद्यालय, चयनपुर गुफाको गुफापोखरी प्राथमिक विद्यालय र मैवाखोला ढुंगेसाँघुको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका लागि कम्प्युटर खरिद, पुस्तकालय स्थापना, स्टेसनरी, खानेपानी व्यवस्थापन अनि खेलमैदानका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आयोजनाभित्र परेका छवटा गोठ र चारवटा शौचालय लगायतका १९ वटा संरचनाका लागि १ करोड १२ लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । आयोजनाभित्र परेका ११ वटा वन उपभोक्ता समूहलाई जैविक विविधता/वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्युनीकरण, वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम र कृषि, वन सम्बन्धी क्षमता विकासका तालिम आयोजनाले दिने जनाएको छ । बिरुवा रोपिएलान्–नरोपिएलान्, क्षतिपूर्ति रकम आउला–नआउला, तालिम होला–नहोला भन्ने प्रश्न छँदैछन् । तर त्यसो भइहाले पनि लालीगुराँस नगरपालिका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र बन्नबाट रोकिने छैन । जैविक विविधतामा पर्ने क्षतिको परिपुरण रकमबाट हुँदैन ।
वनस्पतिविद्हरूका अनुसार टीएमजे गुराँस प्रजातिको वंशाणु स्रोत हो । अठ्ठाइस प्रजातिका गुराँस यस क्षेत्रमा विभिन्न रङमा फुल्छन् । यो क्षेत्रको ५८ हजार २ सय ३२ हेक्टरमध्ये ५६ हजार १ सय ७३ हेक्टर वनले ढाकेको छ । त्यसमध्ये १५.८० प्रतिशत गुराँस वन पर्छ । यसकारण टीएमजेलाई २०५५ सालमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वातावरण मन्त्री भएका बेला गुराँस संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो । तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र संखुवासभा जिल्लाको संगम स्थलमा पर्ने यो क्षेत्र तमोर र अरुण उपत्यकाको जलधारभित्र पर्छ । यस क्षेत्रमा बन्दुके पोखरी, हाँसपोखरी, सभापोखरी, भुतेपोखरी, खोप्रिङ पोखरी, गुफापोखरी, लामपोखरी, पाँचपोखरी, रातपोखरी, पात्ले पोखरीजस्ता ठूलठूला पोखरी छन् । यहाँ रेड पाण्डा, मुसे टाउके खरायो, हिमाली कस्तुरीजस्ता लोपोन्मुख वन्यजन्तु पाइन्छन् । वन लसुन, धुलेझार, चिम्फिन, बिख्मा, पाँचऔंले, कुट्की, जटामासी, ठूलो पाखनवेद, सुनधुपी, भैरुङपाती, लौठसल्लो जस्ता गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा जडिबुटी पनि प्रचुर मात्रामा छ । यो क्षेत्रले मकालु–बरुण राष्टिय निकुञ्ज हुँदै तिब्बतलाई जोड्छ । त्यस्तै कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्र हुँदै भुटान जोडिन्छ । नेपाल सरकारले सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा टीएमजेलाई पनि राखेको छ ।
कोशी कोरिडोरको सर्वेक्षणका क्रममा स्थानीय सरोकारवालालाई बेवास्ता गरियो । आयोजनाका लागि विद्युत प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक शाखामार्फत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने सहमति स्थानीय नगरपालिका र चैते सामुदायिक वनसँग २०७३ जेठ २ मा लिइयो । आयोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्दा अरु कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता, स्थानीयबासी, आदिवासी जनजाति, राजनीतिक दल वा सरोकारवालासँग समन्वय गरेन । आयोजनाबाट पुग्ने असर र क्षतिपूर्तिका बारेमा कुनै छलफल/कार्यक्रम पनि भएन । प्रसारण मार्गको सर्वेक्षणमा पनि कसैलाई बोलाइएन । एकलौटी ढंगले प्रसारण एलाइन्मेन्ट/मार्ग तोकियो । प्रसारण मार्ग विस्तार गर्दा नाङ्गा र भिराला पाखाहरूमा टावर गाड्न बढी खर्च लाग्थ्यो । प्रसारण मार्ग छोट्याउन गुराँस काटेरै भए पनि होचो ठाउँबाट विस्तार गरिन लागेको छ । देउरालीदेखि संखुवासभा र तेह्रथुमको सिमानै–सिमाना प्रसारण मार्ग लगिएको भए सयवटा पनि रुख काट्नु पर्दैनथ्यो ।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा आयोजनाले प्रसारण मार्गको टावर वा सबस्टेसन निर्माण गर्दा जैविक विविधतायुक्त विशेष क्षेत्र बचाउने भनेको छ । वनस्पती फँडानी गर्दा प्रविधि वा ह्याभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने र टावरलाई अग्लो भूभागमा राखिने पनि उल्लेख छ । तर अहिले टावर निर्माण कार्यमा ठेकेदारहरूले डोजर चलाएका छन । लापरबाही काम गर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर रुख फाँडिने देखिन्छ । खानेपानीका दर्जनौं मूल, आहार र पोखरी सुक्ने जोखिम छ । करिब ३५ वर्षअघि यसै क्षेत्रको चैते सामुदायिक वनबाटै वसन्तपुर–म्याङलुङ सडक खनियो । करिब २० वर्षअघि ताप्लेजुङ र संखुवासभा जाने सडक खनिए । जसका कारण लम्बुखोलाको मूल सुक्न थाल्यो । कोशी कोरिडोरका कारण गाउँ–बस्ती काकाकुल बन्ने निश्चित छ । टीएमजेको जैविक विविधता र पर्यावरण नष्ट हुनेछ । पानीका मूल सुकाएर क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि पानीका मूल जोगाएर विकास निर्माण गरिनुपर्छ ।
कोरिडोरले टीएमजे क्षेत्र अनि नगरवासीलाई पुर्‍याउने क्षतिका बारेमा आयोजनासँग सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । कोशी कोरिडोर पीडितहरूको एउटैमात्र माग भनेको प्रसारण मार्ग परिवर्तन गरियोस् भन्ने हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा अनिवार्य रूपमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार कुनै पनि योजनाको आवश्यकता अनुसार स्वरुप परिमार्जन गर्न, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्न सकिन्छ । आयोजनाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । त्यस्तै आयोजनाले स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन समूहहरू, स्थानीय बासिन्दा, आदिवासी जनजाति जस्ता सरोकारवालासँग समन्वय गरेर प्रसारण मार्ग विस्तार गर्नुपर्छ ।
-माबुहाङ तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख हुन् । प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ १०:०१
हेर्दा सामान्य लाग्ने हजारौं वर्ष पहिलादेखि चलाउँदै आएको कुटो (नुग्रे या कोरेसो) जस्तै कुप्री पर्दै आफ्नो र परिवारको पेटको आगो निभाउन रातदिन खटिन्छन् ।
चैत्र ८, २०७६ कृष्णप्रसाद पौडेल, सुजाता तामाङ
तम्मोमा अन्न पिन्ने पानीघट्ट हुनान्, यी घट्टमा गेडा झाड्न मिल्ल्याउने चडा (चरा) बनाया छन् ।’ जुम्ला तातोपानीका धन गौतमको यो प्रश्नले गाउँका पानीघट्ट नदेख्ने नेपालीलाई गिज्याए जस्तो लाग्दो हो । तर त्यस्तो हैन । घट्टमा हुने यो चराको मुख्य काम पिस्न राख्ने अन्नको दाना ठिक्क खसाल्ने हो, यो आफै चल्ने हुन्छ । यो चरो नभएको घट्टमा एक जनाले कुरेर बेलाबेला लौरो चलाउनुपर्छ । यो काम गर्नमात्र एकजना छुट्टै श्रमिक चाहिन्छ । यो पिन्ने काम र चराको काम गर्ने हिजोआज अधिकांश महिला छन् ।
खेतबारी, दाउरा–घाँस, गाईवस्तु, बालबच्चा र पाका मानिसको स्याहारमा कर्णालीजस्तै अविरल बगिरहेका छन्, त्यहाँका महिला । उनीहरू हेर्दासामान्य लाग्ने हजारौं वर्ष पहिलादेखि चलाउँदै आएको कुटो (नुग्रे या कोरेसो) जस्तै कुप्री पर्दै आफ्नो र परिवारको पेटको आगो निभाउन रातदिन खटिन्छन् । यस्तो कुटोजस्तो देखिने औंलाहरू भएको काठबाट बनेको खेतीपातीको औजारलाई स्थानीय भाषामा नुग्रे (तीन औंला भएकोलाई) र कोरेसो (पाँच औंला भएकालाई) भनिन्छ । यिनले यही कुटो चलाएर सिंगो कनार्लीका मानिसको रोग र भोक मेटाउने जिम्मेवारी बोकेका छन्  । तर यो कुरा बुझ्न हामी कसैलाई फुर्सद छैन ।
कर्णालीका महिलाले खेतीपाती गर्न, खासगरी झार जिलाउन र पिरोल (सल्लाको पात) सोहोर्न चलाउने यस्तो कुटो बिरुवा स्याहार्ने सबैभन्दा आदिम, दिगो र सरल प्रविधि हो । यो बच्चा स्याहार्ने आमाले आफ्नो पेटको बच्चाको भविष्य जोगाउन गरेको मानवीय बुद्धिमत्ताको उत्कृष्ट आविष्कार हो । यसको कर्णालीका महिलासँग मात्र हैन, यहाँको माटो, पर्यावरण र प्रकृतिसँग घनिष्ट साइनो छ । यसले बढीमा १.५ इन्चमात्र माटो चलाएर धरतीको छाला कसरी मानव सृष्टि थाप्न पर्याप्त छ भन्ने बताउँछ ।
यो खेतबारीमै पाइने सबैभन्दा बलियो बुट्यान घंगारु जसलाई स्थानीय भाषामा (रुइत) भन्ने काठबाट बनाइन्छ । आफ्नो ‌औंला हेरेर आफ्नै सजिलाका लागि आविष्कार गरिएको यस्तो दिगो, सस्तो र सरल प्रविधिसमेत अहिले पुरुष पौरखको विकास ढाँचामा कैदी भएको छ । फलामबाट बनाइएको यो कुटो अहिले सुर्खेत बजारमा ३ सय रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ । आफ्नै खेतबारीको घंगारु स्याहार गरेर दिगो कुटो बनाउनुको साटो फलामको कुटो बनाएर नाफा कमाउने सपना देख्ने र देखाउने विकासेबारे कर्णालीका महिला के सोच्दा हुन्, अन्दाज गर्न धेरै कठिन छैन । यी र यस्तै जैविक खेतीका अचुक र दिगो प्रविधि चलाएर कर्णालीबासी जीवनलाई सरल बनाउँछन् ।यसको नजिकैको अर्को उदाहरण भने अचम्म लाग्दो छ । उनीहरू घरैमा पकाउने तेलको जोहो गर्न काठको बाकस (स्थानीय भाषामा जसलाई दुनो भनिन्छ) मा तेल आउने ओखर, तोरी र अन्य उपजको धुलो हातले माडेर तेल निकाल्छन् । धेरैले सुन्दा नपत्याउने यो कुरा एउटा डोरीको त्यान्द्रोमा घाँस–दाउरा गरेर गाड (खोला) वारपार गर्ने तुइनभन्दा कम कष्टकर छैन ।
मुलुकका टाठाबाठा भने कर्णालीबासीको जिन्दगीलाई स्थानीय विशेषतामा आधारित भएर उन्नत बनाउने सोच राख्दैनन् । सुर्खेतको बाटो हुँदै सिंहदरबारको सपना बाँडेर कर्णालीबासीको गरिबी र अभावको विम्ब प्रस्तुत गरी उनीहरूकै स्वाभिमानको खिल्ली उडाउँछन् । सिंगो राज्य र शासकहरू दाताले दिएको भन्दै ‘उडुवा’ चामलसमेत जहाज र हेलीमा (चिलगाडी) उडाउँछन् । र त्यही चामल खान बाध्य बनाउँदै झाडापखाला र पोषण अभावको दुश्चक्र बढाउँछन् । यिनले दाताका दानको दुरुपयोग गर्दै कर्णाली समाजमा परनिर्भरता र असुरक्षाको त्रास फैलाउँदै मगन्तेको बिल्ला भिराएका छन् । स्थानीय खेतीपाती तहस–नहस बनाएर यहाँका मानिसलाई घरबार चलाउन अब मौसमी हैन, स्थायी परदेशी बनाउँदैछन् । अधिकांश घरका पुरुष काम र आम्दानीको खोजीमा मौसमी बसाइँ–सराइ गर्छन । पहिले–पहिले खेती लगाएर भारतमा काम गर्न जाने र खेती भित्र्याउन घर फर्किने दाजुभाइ हिजोआज कमाइ कम हुने तर दिनदिनै घरायसी खर्च बढेसँगै लामो समय उतै बिताउन थालेका छन् । यसले गर्दा पुरुषले सघाउने कामहरू पनि यिनै महिलाहरूले नै सम्हाल्नुपर्ने भएको छ ।
यहाँका मानिसहरू गाईवस्तुसँगै एउटै घरमा बस्छन् । यी घरहरू भुइँ तलामा गाईवस्तु राख्ने र माथिको तलामा मानिस बस्नेगरी बनाइएका छन् । भान्सा र मझेरीमात्र भएका यी घरहरूमा चिसो छल्न सबैजना अगेना वरिपरि सुत्छन्, कतिपयसँग ओढ्ने र ओछ्याउने कपडा पर्याप्त हुँदैन । अझ महिनावारी र सुत्केरी भएका दिदीबहिनीहरू यिनै गाईवस्तुको गोठमै सुत्छन् । किनकि यी महिलाले यस्तो बेलामा घर र भान्सा छुनु हुँदैन ! यो थाहा पाए देउता त अझ धेरै रिसाउँछन् ! सर्प र असुरक्षाको त्रास सहँदै (छाउपडी), पुरुष दासताको बोझ बोक्दै (देउकी) बालबच्चाको स्याहार गर्छन्, यहाँका महिला । भरखर यौवनको खुटकिला टेक्दै गरेका ग्रेटा र मलालाले संसारलाई जोगाउन विश्वभरिका नेतालाई औंला ठड्याउँदै सचेतनाको शंखनाद गर्दा कर्णालीका नानीहरू भाइबहिना बोकेर घरबारी कुर्न/गर्न बाध्य छन् । यिनले काला अक्षर चिन्नसमेत राम्ररी पाउँदैनन् ।
कर्णालीका महिला बिहान सखारै उठ्छन् र राति अबेलासम्म घोटिइरहन्छन् । घामपानी केही भन्न पाउँदैनन्, सबै भ्याउँछन् । विकासेका ‘विचरा’ यी जिउँदा महिला तिनका भेला–मेला भर्न र जागिर जोगाइदिन समेत सधैं तम्सिन्छन् । यहाँका अधिकांश दलित बस्तीमा अझै पनि चर्पी छैनन् । चर्पी बनाउन खटिएका सरकारी तथा गैरसरकारी हाकिम र कारिन्दा जिल्ला सदरमुकाम वरपर धेरै भेटिन्छन् । ‘खान त नई मिल्न्या केई कि बनाउने हुन चर्पी ?’ भन्ने एउटा दलित महिलाको व्यंग्य सिधा छ । यस्तो सिधा कुरा ती हाकिमहरूले पनि सुनेका छन्, तर नसुनेझैं बुझपचाउँछन् । किनकि यस्ता कुरामा जति बुझ्पचाउन सक्यो, त्यत्ति नै बढी शुभलाभ छ । पोहोर साल नै सबैका घरमा चर्पी बनाइसकेको घोषणा गरेको सरकार यस्तो चर्पी जान गाउँलेहरू के खान्छन् भन्नेमा चिन्तित छैन । उल्टै चर्पी बनाउने र दातालाई प्रगति बुझाउनेमा नै उसको सबैभन्दा ठूलो जित छ ।
यी महिला जसरी हुन्छ, चारपाउ गर्दै औषधिजन्य र पोषणजन्य अन्नपात उब्जाउँछन् । तैपनि चिनो, कागुनो मार्से, मार्सी (चालम), गुराँस, चोतोजस्ता पोषिला खानेकुराको भाग खोसिएको हेर्न बाध्य छन्, उनीहरू । अहिले नेताज्यूहरूको मार्सी ज्युनारसँगै यसको काठमाडौंको बजार ह्वात्तै बढेको जो छ !
कुटो चलाएर जीविका चलाउने कर्णालीका महिलालाई अहिले मानव, माटो र पृथ्वीको स्वास्थ्य संकट थोपरिएको छ । यो भूगोलले नखाएको विषको मूल्य चुकाउँदैछ । पानीका मुहान सुकेका छन् । खडेरी र वर्षा बढेको छ । यी सबैको प्रभावले खाद्य तथा पोषण अभाव, जलवायु संकट र नसर्ने दीर्घरोगको बिगबिगी बढेको छ । यसले समग्र मानव सभ्यता भूकम्पले जस्तै हल्लाएको छ । यो अब ढल्न ढल्पलाएको छ ।
यी सबैको लेखाजोखा समेत यी महिलाहरूले राखेका छन् । अहिले अलि जब्बर भएका छन् । धेरै नै जुर्मुराएका छन् । तीन–चार दशक पहिला हामीजस्ता परदेशी देखेर सात्तो जाने डरले आफ्नो झुप्रो छिर्ने महिला अहिले बाटामा उभिएर ठट्टिँदै कहाँ हिँड्नुभयो, ‘सर/म्याम’ भनेर गिज्याउन सक्ने भएका छन् । सबैतिर यस्तो आँट भने अझै बढेको छैन । विचरो कुटो बोकेर यहाँका मानिसको जिन्दगी चलाइदिने महिलाको विवेकपूर्ण ज्ञान, आँट र धैर्य बुझ्न ठूलै छाती चाहिन्छ । त्यसैले सके सपारौं, नसके नबिगारौं भन्ने कुरा मनन गर्ने हो कि ?
साथै यहाँ उठाइएका सन्दर्भलाई एक पक्षबाट मात्र अवश्य हेरिनु हुँदैन । कर्णालीमा उल्लिखित विभेदमात्र छैन, समाज र प्रकृतिमा सौन्दर्य र विविधताको विशाल भण्डार छ । यहाँबाट सिक्न सकिने थरीथरीका (दुबै महिला र पुरुष) जिउँदा र असल मानवीय अभ्यासहरू छन् । कर्णालीमा विभेदको पर्खाल नलगाएका महिलामात्र हैन, सँगसँगै जीवन धान्न रातोदिन खटिने जिउँदा पुरुषहरू पनि छन् । सबैका सिक्नलायक फरक विशेषताका संस्कृति र सामाजिक मान्यताहरू छन् ।
प्रकाशित : चैत्र ८, २०७६ ०९:५३